UNYANGO LWASEKHAYA LWEGOUT - IIMEKO ZEMPILO
Unyango lwasekhaya olu-5 lweGout
Kwakukho ixesha apho kuphela zizityebi ezazinokutya inyama eninzi ebomvu, utywala, kunye nokunye ukutya okunzima, okunamafutha. Yiyo loo nto igawuthi, uhlobo olubuhlungu lwesifo samathambo olunokubangelwa kukutya okunotyebileyo, ngamanye amaxesha kuthiwa 'sisifo sookumkani.' Namhlanje, nangona kunjalo, abantu banokukwazi ukuzinkcinkca ngotywala — yaye ngenxa yoko, igawuthi yandile eUnited States kunanini na ngaphambili.
Igawuthi — edla ngokuchaphazela amalungu amakhulu obhontsi, kodwa ingenzeka nasemaqatheni, eminweni, ezihlahleni, emadolweni, okanye engqinibeni — ibangelwa kukungakwazi komzimba ukulawula amanqanaba ayo euric acid, utsho UBernadette Siaton , MD, unjingalwazi oncedisayo kwezamayeza kwiYunivesithi yaseMaryland School of Medicine. Iikristali ze-Urate zakha kumalungu, zizisa ukuvuvukala okuxeliweyo kunye nentlungu.
Ngelixa unyango lwe-gout ludla ngokufuna amayeza, kukho iindlela zokulawula iimpawu zakho ze-gout ngaphandle kokuphuma kweepilisi. Ukuzivocavoca umzimba kunye nokuphepha ukutya okunyusa amanqanaba e-uric acid akho ukuthi ga ezona ndlela zisebenzayo zokulawula imeko, utshilo uGqirha Siaton. Cinga ngezo ndlela zakho zomgangatho wegolide zokufumana isiqabu segawuni.
Kodwa ezo nguqulelo zimbini zokuphila bucala, bukhona ubungqina bonyango oluxhaswa ekhaya lwe-gout onokuzama ukuba iimpawu zakho ze-gout ziyavutha. Nazi ezintlanu zazo.
Izigulana ezithe zatya iitsheri ngexesha leentsuku ezimbini zazingaphantsi kwe-35% amathuba okuba bafumane iimpawu kunezigulana ezingatyiyo iitsheri. isifundo se-2013 kwijenali Isifo samathambo kunye neRheumatology
Iitsheri ziqulathe iianthocyanins, udidi lweemolekyuli zombala ezichasayo ezinika iitsheri umbala wabo obomvu, kwaye ezinokuthi zichaze izibonelelo zabo ezichasene negawuni, ababhali besifundo bathi.
Ukusela ulwelo olongezelelekileyo kunokunceda izintso zakho ngokukhawuleza ukuhambisa i-uric acid engaphezulu ngomchamo wakho, utsho U-Elizabeth Volkmann, MD , i-rheumatologist kunye nomphandi wokuguqulela kwi-UCLA Health.
Abasetyhini kufuneka bajonge ukusela ubuncinci ii-ounces ezingama-90 zamanzi ngosuku, kwaye amadoda afuna ii-ounces eziyi-125, ngoku ka iBhodi yokutya nesondlo. Cwangcisa ubuncinci ubuninzi, okanye ngaphezulu, ukuqinisekisa ukuba izintso zakho zinokwenza into yazo. Ikofu inokuphinda inyuse i-uric acid excretion, utshilo uGqirha Volkmann.
Yitya ubisi olunamafutha asezantsi
Ngelixa uninzi lwabantu abanesifo segawuthi begxila ekuphepheni ukutya okunokuzenza mandundu iimpawu zabo, okunye ukutya kunxulunyaniswa nokwehla okukhulu kweempawu zokugula, kubonisa uphando kwi Ijenali eNtsha yaseNgilani yoNyango . Ngaphezulu kolo luhlu: lubisi olunamafutha asezantsi. Abantu abatya ubisi olunamafutha asezantsi okanye iyogathi kabini ngeveki okanye nangaphezulu banciphisa umngcipheko wokuhlaselwa yi-gout ukuya kuthi ga kwi-48%, kufunyenwe isifundo se-NEJM.
Zama ivithamin C
I-Vitamin C kudala ijongwa njengesixhobo esinokubangela isifo segawuthi. Kwaye kukho ubungqina ivithamin C inokunciphisa amanqanaba omzimba we-uric acid. Kwelinye icala, ezinye uphando ziye zasilela ukufumana izibonelelo zevithamin C kwizigulana ezinesifo.
Ngelixa ijaji iphumile malunga nokuba uC ligorha elibulala igout, isifundo esinye Ukusuka kwiYunivesithi yaseJohn Hopkins kufunyenwe ukuthatha i-500 mg ivithamin C yokongeza imihla ngemihla kangangeenyanga ezimbini kwehle kakhulu i-uric acid yomguli. Jonga kuqala nogqirha wakho. Kodwa ababhali beso sifundo bathi i-vitamin C ithathwa njengekhuselekile kubantu abaninzi.
Zinjani ivumba leebugs
Yongeza ezi probiotic kwisidlo sakho
Masicace gca: ubungqina bokuba ii-probiotic zinokunceda nge-gout ziqala kwaye zikude nokuqina. Kodwa olunye uphando lwangaphambili-kubandakanya i-2014 Isifundo kwi-PLOS One -Ukufumana iintlobo zeprobiotic THE Izityalo ze-actobacillus, iLactobacillus acidophilus kunye neLactobacillus rhamnosus inokunceda inkqubo yakho yokwetyisa iphule kwaye ilahle iipurine ngokufanelekileyo. Oko kunokuwathoba amanqanaba omzimba wakho we-uric acid, kwaye ke ukunciphisa umngcipheko we-gout flares. Ungaqali ngokufaka i-kefir ephambili ngegaloni. Kodwa ukusebenzisa ikombucha okanye ezinye iimveliso zeprobiotic zendalo eziqulathe ezo ntlobo zinokubangela isiqabu.
izihlangu ezifanelekileyo zokuma yonke imini
kuthetha ukuthini ukubona i-555
lithetha ntoni i-888 ngokwasemoyeni
kuthetha ukuthini ukubona 222
Isithambisi esihle solusu olubuthathaka nolomileyo
Inombolo yeengelosi 1111 ezinentsingiselo